Edito Rivo-baovao !
Edito Firehana manimba
Miditra ao anatin’ny antsoina hoe rivo-pifidianana sahady indray isika ankehitriny.
Maro no gaga, teo ny sanganehana, nisy no nalahelo, sosotra sy diso fanantenana omaly raha nahafantatra ny kandida natolotry ny antoko politika 2 sokajiana fa matanjaka indrindra eto Madagasikara amin’izao fotoana.
Edito Bokotra diso fanidy
Tafiditra ao anatina teny fampanantenana nataona filoham-pirenena anisan’ny niezinezina indrindra teto ambonin’ny tany ny veliranon’ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny hoe « Ny asa tsy vita tao anatin’ny 58 taona dia hovitaintsika ao anatin’ny 5 taona. ».
Voky fampanantenana !
Niteraka fitoniana ara-politika tao anatin’ny fotoana fohy ny fandalovan’ny Papa Fransoa teto.
Edito Ho hita eo tokoa !
Tonga ity ny fotoana hiverenan’ny filoham-panjakana vatikanina any amin’ny firenena nampandraketana azy ary hialany ihany koa eto Madagasikara taorian’izay fotoana vitsy nafonja niezahany namafy fiadanana sy fanantenana teto izay.
Edito Hisoroka fahafaham-baraka…
Tonga ity ilay andro malaza. Higadona eto an-tanindrazana ny vahiny lehibe ary tena manan-kaja.
Mila maka lesona !
Handray vahiny manan-kaja i Madagasikara, izay voninahitra lehibe ho antsika ary antenaina fa hitondra aim-panahy ho an’ny vahoaka sy ny firenena, indrindra fa ny mpino katolika.
Asa aloha ny fahitantsika mpanara-baovao azy fa saika samy nilokaloka ny hitondra rivo-baovao eny anivon’ny antenimieram-pirenena eny daholo fony vao lany ireto solombavambahoaka vaovao ireto.
Ity ve no tonga amin’ilay fomba fanontany ankehitriny hoe samy manana ny rivo-baovaony io sa tena izao mitranga izao tokoa no atao hoe rivo-baovao ? Hodisoina ve ireo mpanao politika sy mpandinika raharaham-pirenena sahy nilaza hatry ny omaly fa maha ratsy endrika antsika eo anivon’ny sehatra iraisampirenena ireny 100% nifanesy teny anivon’ity andrim-panjakana voalaza ity ireny ? Tena azo antoka ve fa fanoherana tena izy fa tsy sarintsariny no hitranga ary azo antenaina ihany koa ve ny hisian’ny fifandanja-kery ao anatin’ity andrim-panjakana iray ity ? Afaka manome fanazavana sy fiarovantena daholo izay mankato iny zava-nitranga iny saingy ny bainga voavadika ihany no vavolombelon’ny asa, hoy ny Ntaolo, ary heverina ho mifanandrify indrindra ihany koa amin’izao faha 6 volana nisian’ity fitondrana ity izao izany. Aiza ho aiza ihany koa ny fanatanterahan’andriamatoa filoha ireo vina nampanantenainy ? Sa singa hanakonana ny tsy fahatontosan’izany vaovao koa ity resaka antenimiera ity ? Fehiny dia hoe izao fiovana izao tokoa ve hitondra rivo-baovao mahasoa sa vao mainka hahavoa ?